Na 7, Zora Ball bụ Onye Kacha Elu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu ụwa | KONGOLISOLO
Site na: KongoLisolona: July 8, 2017 00: 30 Enweghị asịsa
Nye mkpụrụ obi a mụrụ nke ọma, uru anaghị echere afọ ole na ole, dị ka Corneille kwuru. Obere Zora Ball bụ otu n'ime mkpụrụ obi a mụrụ nke ọma, kwere nkwa ọdịnihu dị mma n'isiokwu nke mmemme egwuregwu vidio.
N'elu afọ 7 ya, ọ ghaghị igwu egwuregwu nke afọ ya. Ma nwa agbọghọ ahụ, bụ onye malitere afọ mbụ ya nke ụlọ akwụkwọ praịmarị na Institute Harambee nke Sayensị na Nkà na ụzụ na Philadelphia, enweela ngwa ngwa ọ na-eji ngwa ngwa. Ọ ghọrọ nwata na-eto eto nke egwuregwu vidio.
E kpughere egwuregwu ya n'oge ememe ahụ Bootstrap Expo, ngwụsị afọ gara aga, na Mahadum Pennsylvania. E mepụtara ya site na iji asụsụ mmemme bootstrap, nke a na-akụzirikarị ụmụaka toro eto n'etiti afọ 12 na 16 iji nyere ha aka ịghọta echiche nke algebra site na mmemme egwuregwu vidio.
N'oge ngosi, ihe na-eto eto enwewo ike ịzigharịa ngwa ya n'ụzọ zuru ezu mgbe a gwara ya ka ọ mee otú ahụ, na-akọ akụkọ mgbasa ozi Tech Mashable. Ndị ọrụ nke Harambee Institute ebe Zora na-amuta ma na-ekere òkè na mmemme Extralọ Akwụkwọ Extra, na-atụ anya na ọ ga-enweta nnukwu ihe, dịka akọwara na otu akụkọ na akwụkwọ akụkọ Philadelphia Tribune.
"Enwere m obi ụtọ maka Zora na ụmụ akwụkwọ m niile," ka Tariq kwuru Al-Nasironye na-agba ọsọ STEMnasium Learning Ụlọ akwụkwọ. "Nrara ha raara onwe ha nye usoro a dị ịrịba ama, ha na-abata klas Saturday ọ bụla, gụnyere oge ezumike. »
N'afọ gara aga, ndị mgbasa ozi kwukwara ọtụtụ ihe banyere Kelvin DOE, nke a na-eto eto Sierra Leone 13 afọ ole na ole gara aga bụ onye kere batrị na generators na iji ihe ndị anakọtara na mkpọ mkpofu. Afọ atọ mgbe nke ahụ gasịrị, ọ ghọrọ onye na-eto eto ka a kpọọ ya òkù MIT na Boston.
Ọkt28 07: 01